မိမိ Gmail လေး အဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေချင်သော် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
သင်္ကြန်တွင်းလားမသိ။ တယ်ဂျင်းကြီးတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းထားတာ။ သူ့ဂျီမေး disabled ဖြစ်သွားလို့တဲ့။ ကိုယ်က ဒါကို သိမနေခဲ့ဘူး။ ၂ပတ်လောက် အွန်လိုင်း မတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ သူက PM မေးလ်ပို့ထားတာ။ အွန်လိုင်း တက်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီအကြောင်း သိလိုက်တော့ Redeem လုပ်ဖို့ တော်တော်ကြီး နောက်ကျသွားတယ်။ 72နာရီကြာအောင် စောင့်ပီးနောက် Redeem ကို အသိအမှတ်မပြုမှန်း သေချာသွားတယ်။ အရမ်း အားနာပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ်။ မင်းအတွက် ကိုယ် လုံးဝ အသုံးမတဲ့ခဲ့ဘူး…။
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ပေါ့နော်။ နောင် ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ လိုလာပီပေါ့။ ခဏတဖြုတ်သုံးတဲ့ account ကို ထားပါတော့။ နှစ်အတန်ကြာ သုံးလာပီးမှ Google က ဒီလိုမျိုး မိမိအကောင့်ကို ပိတ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုရင် သင်ကော ဘလိုလုပ်မလဲ။ အကောင့်ထဲမှာ၇ှိတဲ့ information တွေနဲ့ ကိုယ့်အကြားမှာ ရှိတဲ့၊ ကိုယ်သာသိနိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တန်ဘိုး (attachment value) ကို ကိုယ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူက တန်ဖိုး ဖြတ်နိုင်မှာလဲ။ နောင် ထပ်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ဖို့ လိုလာပီပေါ့။ ဒါဆို မိမိ ဘာများ လုပ်မိလိုက်လို့လဲ ဆိုတာ အရင် ပြန်သုံးသပ်ရမယ်။ အဖြေက တစ်ခုတည်းရယ်။ Google က ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်မိလို့ပါတဲ့။
ကဲ… အခု ကျတော်တို့ အဲ့ဒီ စည်းကမ်းတွေကို နောင်တမရခင် လေ့လာထားကြမလား။
စည်းကမ်းက (၂)မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။
၁) TOS လို့ အတိုခေါ်တဲ့ Google Terms of Service နဲ့
၂) ပေါ်လစီ (Gmail Program Policies) ပါပဲ။
၂မျိုးတည်းသာပြောတာ။ အချက်တွေကတာ့ အများကြီးပဲ။ အောက်ဆုံးမှာ မူရင်း အီးလို တွဲပေးထားတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်။
အဓိက ကိုယ်ပြောချင်တာကတော့ ဘာဖြစ်ရင် အကောင့်ကို ပိတ်(disabled) ခံရနိုင်လဲ ဆိုတာပေါ့၊ TOS အပိုဒ်(၁၃)မှာ ပါပါတယ်။
အကောင့်ကို ပိတ်(disabled) ခံရနိုင်သော အချက်အလက်များ။
(A) မိမိဆန္ဒပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည် ဖြစ်စေ Google ၏ TOS ကို ချိုးဖောက်လျင်။
(B) ဥပဒေအရ မလွဲသာ ရှောင်သာ၍ Google မှ မိမိထံပေးမြဲ service ကို ပိတ်ရလျင်။
(C) မိမိထံ ဤ Service ရောက်ရန် သုံးရသော Google ၏ partner မှ Googel နှင့် လက်တွဲ ဖြုတ်လျင်။
(D) မိမိနေထိုင်ရာ ဒေသသို့ Google မှ ဤServiceကို မပေးတော့ဟု ဆုံးဖြတ်လျင်
(E) ဤ Service သည် Googel အတွက် စီးပွားရေးအရ တွက်ချေမကိုက်ဟု ယူဆလျင် တို့ ဖြစ်ပါသည်တဲ့။
ဒါများ ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ စောဒက မတက်နဲ့ဦးနော်။ Gmail Policies လေး ဆက်ဖတ်ပြဦးမယ်။
အဲ့မှာ တားမြစ်ထားသော အချက်တွေ ပါနေတယ်။
တယ်ဂျင်းတို့ (အဲ…အကောင့်အပိတ်မခံချင်သူများသာ) ရှောင်ရမဲ့ အချက်တွေကတော့….
၁) စပန်းမေး ပို့ခြင်း ဥပမာ။
က) လက်ရှိ Spam Filter များတွင် စပန်းမေးများ။ လူတစ်ဦး၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်သော စပန်းမေးများ။
ခ) စပန်းမေးများ ပို့ရန် အကောင့်တု ဆောက်ခြင်း။
ဂ) မိမိအကောင့် ဝင်ထားလျက်နှင့် Google စသည် Search Engine သုံး၍ သူတပါး၏ အီးမေးလိပ်စာအား လိုက်လံ ရှာဖွေခြင်း။
(ဥပမာ။ ayethein90@gmail.com ကို SearchBox ထဲ မရှာမိစေနဲ့။
ရှာချင်ရင် ပါးပါးနပ်နပ် ayethein90 လောက်ပဲရှာပါ။ )
ဃ) Gmail ကလွဲ၍ အခြား Mail Servers များမှ ဂျီမေးအကောင့်ကို သုံး၍ အီးမေးပို့ခြင်း။
င) မေးစာရင်းမှ ဖျက်ပေးပါရန် တောင်းဆိုလာသော သူထံ အီးမေးများ ထပ်ခါတလဲ ပို့ခြင်း။
စ) ကာယကံရှင်၏ သဘောတူညီမှု့မရှိပဲ ၎င်း၏ address bookများ (အီးမေးလိပ်စာများ) ရောင်းစားခြင်းကို တွေ့ရှိပါက။
ဆ) မိမိနှင့် အဆက်အစပ်မရှိသော သူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများထံ တစ်စောင်တည်းနှင့် လိပ်စာတော်တော်များများသို့ အီးမေးပို့ခြင်း။
၂) ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော၊ အရှက်ရစေသော၊ အလွဲသုံးစားဆန်သော၊ အတုအယောင်ဖြစ်သော၊ ငြိစွန်းသော၊ အဓမ္မဆန်သော၊ လက်ခံနိုင်စရာမရှိသော အချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်း။
၃) ဗိုင်းရပ်စ်၊ ထရိုဂျန်စသည် အဖျက်အမှောင့်များ၊ ဖိုင်အပျက်များ၊ သတင်းတုများ၊ သဘာဝနှင့် အံကိုက်မိမရှိသော၊ ဖျက်လိုဖျက်စီးတတ်သော အရာများ ပို့ခြင်း။
၄) နည်းယောင်းများယောင်းတောင်းပြည့် ဟူသော သဘောရှိသည့် ငွေကြေးများ ကောက်ခံရန် အီးမေးလ်ပို့ခြင်း။
၅) လူငယ်များ ထိခိုက်စေမည့် အကြောင်းအရာများ ပို့ခြင်း။
၆) လျှို့ဝှက်အီးမေးဖြင့် သူတပါးအား အပုပ်ချ စော်ကားခြင်း။
၇) တပါးသူ၏ အနုပညာလက်ရာ (ဝါ) မှတ်ပုံတင်ထားသော အရာများ ခွင့်ပြုချက်မရ အွန်လိုင်းမှ ပေးပို့ခြင်း။
၈) ဂျီမေးသုံး၍ တည်ဆဲဥပဒေ ချိုးဖောက်ခြင်း။
၉) တပါးသူအား ဥပဒေမဲ့ ပြုမူရန် လှုံဆော်ခြင်း။
၁၀) ဂျီမေးလ်ကို သုံးစွဲနေသော အများတကာ၏ ပျော်ရွှင်မှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း။
၁၁) တစ်ဦးတည်းမှ အကောင့်တစ်ခုထက်မနည်း ဖွင့်ခြင်း (ဝါ) အော်တိုမက်တစ် အကောင့်များ ဆောက်ခြင်း။
၁၂) ဂျီမေးအကောင့်ကို သူများအား ပေးသုံးခြင်း။
၁၃) ဂျီမေး ဆားဗစ်ကို ဝင် ဟက်ခြင်း။ Code ပြန်ဖော်ခြင်း။
၁၄) ဂျီမေး ဆားဗစ်၏ ကော်ပီရိုက်၊ လိုဂို စသည် အမှတ်အသားများအား ဝင်ဖျက်ခြင်း။
၁၅) ဂျီမေး ဝက်ပေ့ခ်ျအား ပြင်ဆင်ထားခြင်း။
၁၆) ဂျီမေးသုံး၍ P2P သုံးစွဲခြင်း။
အခုတလော Google က ဂျီမေးလ် user တွေကို စစ်ဆေးနေပုံပေါ်ပါတယ်။ အကောင့်အသစ်ဆောက်ရင် Mobile ဖုန်းနဲ့ SMS ပြန်ပေးနိုင်မှ အကောင့်အသစ်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲ… Password Reset လုပ်ရင်လည်း SMS နဲ့ Confirm လှမ်းတောင်းနိုင်ချေရှိတာမို့ SMS ပို့ဖို့ အဆင်မပြေသူများ ယောင်လို့တောင် Password Reset မလုပ်မိဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ပေါ်လစီ နံပတ် (၁၁) နဲ့ ငြိပီး SMS မပို့နိုင်ရင် လူအတုလို့ အထင်ခံရပီး အော်တိုမက်တစ် အကောင့် disabled ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပေါ့။ အီးလို ဖတ်ချင်ရင်တော့ ကျနော် CCP လုပ်ထားတဲ့ အောက်က စာများကို ရှုပါခင်ဗျား။
Source: http://www.google.com/accounts/TOS as at 2010 apr 26
6.3 If you become aware of any unauthorized use of your password or of your account, you agree to notify Google immediately at http://www.google.com/support/accoun...y?answer=58585.
Source: http://mail.google.com/mail/help/program_policies.html as at 2010 apr 26
Updated as of September 12, 2008 To uphold the quality and reputation of Google Gmail, your use of Gmail is subject to these program policies. If you are found to be in violation of our policies at any time, as determined by Google in its sole discretion, we may warn you or suspend or terminate your account.
* Generate or facilitate unsolicited commercial email (“spam”). Such activity includes, but is not limited to
o data mining any web property (including Google) to find email addresses
o sending emails to users who have requested to be removed fromamailing list
o selling, exchanging or distributing toathird party the email addresses of any person without such person’s knowing and continued consent to such disclosure
o sending unsolicited emails to significant numbers of email addresses belonging to individuals and/or entities with whom you have no preexisting relationship
* Illegally transmit another’s intellectual property or other proprietary information without such owner’s or licensor’s permission
* Use Gmail to violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others
* Interfere with other Gmail users’ enjoyment of the Service
* Sell, trade, resell or otherwise exploit for any unauthorized commercial purpose or transfer any Gmail account
* Remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in or on the Gmail Service
* Use the Gmail Service in connection with illegal peer-to-peer file sharing
You must promptly notify Google of any breach of security related to the Services, including but not limited to unauthorized use of your password or account. To help ensure the security of your password or account, please sign out from your account at the end of each session.
Google may terminate your account in accordance with the terms of service if you fail to login to your account foraperiod of nine months.
ဒီပို့စ်ဟာ ကျနော် 2010 ခု ဧပြီလ 26 ရက်က တောင်ကြီးမိသားစုနဲ့ REAL FAMILY မိသားစုများမှာ ရေးတင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ဒီမှာလည်း သိမ်းထားလေရဲ့။
Last edited by Lu Zein; 05-08-2010 at 10:23 AM.. Reason: formatting
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ Lu Zein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပျင်း, ကိုသဝေထိုး, ဝင်းအောင်, ကျော်တိုး, ဇော်ရဲပိုင်, မေစံပယ်ဖြူ, မောင်သံသရာ, bonge, htun30, sabai, tu tu, zo
gmail, gmail program policies, gmail tos